MCERP အဖွဲ့ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (မုံရွာ) မှာ ဟောပြောပွဲကျင်းပ
You are here: Home MCERP NEWS MCERP အဖွဲ့ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (မုံရွာ) မှာ ဟောပြောပွဲကျင်းပ
Published: 13 September 2018 | Hits: 211
ဒေသဆိုင်ရာလွှတ်တော်များ အားပေးကူညီရေးအဖွဲ့ (MCERP) ဟာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့က ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)မှာ လွှတ်တော်နှင့် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတမျှဝေဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီပွဲကို ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်က တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၇. ၈. ၂၀၁၈ ရက်နေ့ နေ့လည် ၂နာရီမှာ စတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားအစီစဉ်အရ တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါ်စိုးစိုးခိုင်က အဖွင့် အမှာစကား
အဲ့ဒီနောက်မှာ MCERP အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖေအောင်လင်းက နိုင်ငံတကာလွှတ်တော်၊ မြန်မာလွှတ်တော်၊ ဥပဒေပြုစနစ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာပုံနဲ့ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးသိန်းနိုင်က လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွှတ်တော်စနစ်တွေ၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးပုံတွေ၊ ဥပဒေပြုပုံတွေ
အကြောင်း တက်ရောက်လာကြတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေနဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို အသီးသီး ဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီဟောပြောပွဲမှာ တက်ရောက်လာသူတွေနဲ့ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြတဲ့အစီစဉ်တွေ ထည့်သွင်းထားပြီး သိရှိလိုတာတွေ၊ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးလိုတာတွေကို ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လာသူ ၂၀၀ကျော်ခန့်ရှိပြီး MCERP အဖွဲ့မှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မိတ်ဆက်စာအုပ်တွေကို ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ ပွဲကို ညနေ လေးနာရီမှာ အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။